पार्टी एकताको केही घण्टा बाँकी रहदाँ ओली र प्रचण्डले केके भने ? | suryakhabar.com
Home राजनीति पार्टी एकताको केही घण्टा बाँकी रहदाँ ओली र प्रचण्डले केके भने ?
पार्टी एकताको केही घण्टा बाँकी रहदाँ ओली र प्रचण्डले केके भने ?
on: ३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ११:५४ In: राजनीतिTags: No Comments
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी अब कहिल्यै नफुट्ने गरी आज नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता हुन लागेको बताएका छन् ।
उनले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको योगदानको कदर गर्दै उनहरुको स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गर्न लागेको बताए ।
“हामी सबै मिलेर देश बनाउने हो”, उनले भन्, “त्यसैले हामी काँग्रेसलाई पनि साथमा लिएर चल्दछौँ ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले उनहरुको स्मृतिको दिनमा मुलुकलाई ऐतिहासिक मोडमा पु¥याउनका लागि आफूले नै एकताको प्रस्ताव गरेको समेत उल्लेख गरे ।
राप्रपाले भन्योः फौजदारी अभियोग लागेमा स्वतः निलम्बन
ट्रम्पद्वारा पेरी एकपटक पुनः कोरोना उपचारमा हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको प्रयोगको समर्थन
३ जेष्ठ २०७५, बिहीबार ११:५४